Kodi ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ | Aptoide
Kodi သည် Aptoide App စတိုးတွင် သင့်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ယခုပဲ ထည့်သွင်းလိုက်ပါ!
Kodi အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Kodi အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
I downloaded the app but there isn't any media to watch. Do I need to install an extension? If so, how do I do it?
လွန်ခဲ့သော 1 ပတ်က
baixa na tv philco ate 100% mas nao instala . E esta desatualizado versão atual éa18.4
Kodi နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ